ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်ကင်းပြီး လူမဆန်တဲ့ မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ချစ်သူမျိုးနဲ့ ဝေးပါစေ ဆိုတဲ့ ဝိုင်းစု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်ကင်းပြီး လူမဆန်တဲ့ မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ချစ်သူမျိုးနဲ့ ဝေးပါစေ ဆိုတဲ့ ဝိုင်းစု
ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်ကင်းပြီး လူမဆန်တဲ့ မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ချစ်သူမျိုးနဲ့ ဝေးပါစေ ဆိုတဲ့ ဝိုင်းစု
Posted by nyimalay on Feb 2, 2011 in Celebrity, Entertainment | 16 comments
ယူရေနီယံ အကခန်းမမှာ Dancer လေ့ကျင့်နေတဲ့ ဝိုင်းစုဆီကို အရောက်သွားရင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အင်တာဗျူးတစ်ခု လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောရရင် ဝိုင်းစုသိသလောက်က အချစ်က တစ်ခါတလေ ချိုမြိန်မှုတွေပေးပြီး တစ်ခါတလေ ခါးသီးမှုတွေ ပေးပါတယ်။ ရသမျိုးစုံပါပဲ။
ဘဝမှာ ဝိုင်းစုမုန်းတဲ့ ယောက်ျား တစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်စရိုက်မျိုးကို ပြောပါဆိုရင် အဓိကက ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်မှုမရှိဘဲ သူများပြောတာ နားထောင်တတ်တဲ့ ယောက်ျားမျိုး၊ ကိုယ့်အတွက်ပဲ ကိုယ်ကြည့်ပြီး ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ် မရှိတဲ့ ယောက်ျားမျိုးကို မုန်းတယ်။
ဝိုင်းစုကြုံခဲ့ရတဲ့ ဘဝပြဿနာတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲဆိုရင် ဝိုင်းစုက နည်းနည်း ခေါင်းမာတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ပျော့လွယ်တယ်။ ဝိုင်းစုမလုပ်ချင်တာကို ဘယ်သူမှ ခိုင်းလို့မရဘူး။ အဲဒါတစ်ခုကို ဖြစ်ဖြစ်ချင်း ဝုန်းဒိုင်းကြဲ ဖြေရှင်းတတ်ပေမယ့် စိတ်ငြိမ်သွားတဲ့အခါ သေချာအေးအေးဆေးဆေး စဉ်းစားပြီး ရွေးချယ်တယ်။ ဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့ ဝိုင်းစုက စိတ်လောတယ်။ တစ်ခုခုပြောလိုက်ရမှ ပြီးရင်တော့ အေးဆေးဖြစ်သွားတယ်။
ရှေ့လျှောက် ဝိုင်းစုရဲ့ဘဝမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ကိုယ့်မိသားစုလေးနဲ့ ဖြတ်သန်းချင်တယ်။ စိတ်ချမ်းသာဖို့က လူ့ဘဝမှာ အဓိကပါ။ အဲဒါကြောင့် စိတ်ချမ်းသာမှုကိုပဲ ရွေးချယ်သွားမှာပါ။ ဝိုင်းစုရဲ့ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆုတစ်ဆုကို တောင်းပါဆိုရင် ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်ကင်းပြီး လူမဆန်တဲ့ မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ချစ်သူမျိုးနဲ့ ဝေးပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းချင်ပါတယ်။
Source : First Music News
ဝမ်းဂိုးတူးကမ်း၊ တူးဂိုးသရီးကမ်း၊ သရီးဂိုးတော့လည်း ဖိုးကမ်းလိမ့်မပေါ့။ အကုန်လုံးဂိုးတော့လည်း ကိုကြောင်ကြီးတယောက်လုံး ရှိပါသေးတယ်။
ကိုကြောင်ကြီး so generous.
ဘယ်သူ မပြု မိမိ မှု ပါ တဲ့
ဒါဆို ကိုကြောင်ကြီးက ဒီကစောင့်နေသူပေါ့
သူ့မလဲ အရှက်လည်း ကွဲသေးတယ် ။ ဘာမှလည်း တရားဝင်ဖြစ်မလာပါလားနော် ။ လုပ်မဲ့လုပ်တော့ ထိရောက်အောင်လုပ်ပါလား ။
မက်လောက်စရာ တစ်ကွက်မှမရှိဘူး လို့လဲ ပြောခဲ့သေးတယ်… ပြီးတော့လဲ သီချင်းခွေထဲမှာ လူလိမ်ဆိုပြီး လဲ ဖောက်ခွဲထားသေးတယ်… ခုချိန်ထိလဲ စိတ်မပြေသေးဘူးထင်ပါရဲ့…
ဒါနဲ. … ကွီးချစ်တဲ့ဝိုင်းစုလဲ … လွယ်လွယ်ကူကူ ၀င်ဆေးနိင်တဲ့ … အိုင်နဲ.တူတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် မဖြစ်ပါစေနဲ.တော့။
ကွီးမန်းထားတာကို ကိုကြောင်ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရမလဲ မသိတော့ဘူး။ အိုင်ဆေး အာဖျံကွီး…. ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဲသည်လောက်ထိ မနှိမ့်ချပါနဲ့ကွယ်။
ဒါကတော့ သူတို့ လောကမှာ ဖြစ်နေကြပါ .. အားလုံး အတူတူပါပဲ .. လုံးချင်ကြတော့လဲ သူတို့အပြင် မရှိ .. ကွာကြတော့လဲ တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက် အပြစ်တင်ကြ ..
ယူအက်စ်လာပြီး ..တမြို့ တယောက်လောက်နဲ့တွဲ.. တနိုင်ငံလုံး အမှိုက်ဖွသွားတဲ့ သူကများ ပြောရသေး..။
ဒီတခါတော့ … မြန်မာပြည်ကို ပြန်ကိုမလွတ်တော့ဖို့ ..မြှောက်ပေးလိုက်မှ..။
ကြောင်ဇတ် ခင်းကြ မလို့လားဟင်… @_@
သူတို.လောကလူ တော်တော်များများ ကိုယ်ကျင့်တရား ဘယ်သူမှ မရှိသလောက်ပါပဲ တော်တော် ပျက်စီးနေကြတာ။ မကောင်းတဲ. သတင်းနဲ. နာမည်ကြီးခြင်ကြတာလေ။
ကိုကိုကြောင်ရေ စဉ်းစားပါဦး…..တော်ကြာ ဧည့်ခန်းထဲ ၄ နှစ်လောက် သွားအိပ်ရမဲ့ အဖြစ်မျုိုး
ရွာသားအပေါင်း ( ရွာသူမပါ)
ရွာသားတွေရဲ့ ဝိုင်းစု က ချစ်သူ အသစ်ရနေပြီတဲ့ ။ ကျန်ခဲ့ကြဦးမယ်နော်
ဒါကလည်း အပြစ်ပြောစရာလည်းဖြစ်။ ကရုဏာသက်စရာလည်းဖြစ်တယ်။